uMarshall Bruce Mathers III (eng. Marshall Bruce Mathers III; 17 oktobha 1972, St. Ujoseph, Emissouri, e-USA), ngcono ezaziwayo ngomoya wakhe iqonga igama Eminem (eng. Eminem; stylized njengoko EMINƎM) kwaye alter-ego Slim Shady (ngokuzingisileyo. Slim Shady) — i-american rapper, imbali wonke, umqambi kwaye actor. Ukongeza yakhe solo career, Marshall kanjalo kwi-lamasoldati D12 kwaye hip ngcileza Duo Engalunganga Meets Ububi. Eminem sesinye best-uthengisa umculo abazobi ehlabathini, ngokunjalo eyona-uthengisa imvumi ye-2000s. Yena ufumana igama elinye elikhulu musicians bonke ixesha ngokufowunela ezininzi iimagazini, kuquka Rolling Ilitye, athe wabeka Eminem e inani 83 kwi uluhlu i-100 likhulu abazobi. Enye magazine wabhengeza kuye Ukumkani hip-ngcileza. Ukubala i-Studio umsebenzi zakhe ngamakhamandela, Eminem sele 12 albums ukuze ufikelele phezulu ndawo kwi ibhodi yezaziso 200. Njengokuba solo imvumi, Eminem sele zithengiswe phezu 100 zeerandi albums kwihlabathi liphela kwaye phezu 107 yezigidi yakhe recordings kwaye 44 yezigidi iikopi yakhe albums eamerika yedwa.
Emva releasing yakhe elizimeleyo debut album Okungenasiphelo ngo-1996, Eminem kwenzeka immense popularity kwi-1999 kunye ukukhutshwa Slim Shady LP kwi enkulu umbhalo. Oku longplay earned Eminem yakhe yokuqala Grammy kweelwimi kuba eyona i-rap album. Yakhe elandelayo ezimbini iimbali, I-Marshall Mathers LP kwaye Eminem Bonisa, kanjalo uphumelele a Grammy enye incwadi, ukwenza Eminem lokuqala imvumi ukuphumelela le mbasa kuba eyona i-rap album phinda-phinda kathathu kumqolo. Oku kwaba yalandelwa Encore kwi-2004 kwaye utyelelo naye, emva kokuba Eminem wathabatha a creative isithuba ngenxa yakhe drug addiction. Ngomhla we-meyi 15, 2009, lowo bakhululwe yakhe yokuqala album kwi-5 ezayo, enesihloko Relapse. Ngo-2010, ukukhutshwa wesixhenxe Studio album Imali, esibizwa celebrated kwihlabathi liphela impumelelo kwaye sathiywa eyona uthengisa album lonyaka, I-Eminem Bonisa kwi-2002. Eminem onayo a Grammy kuba zombini album ka-Relapse kwaye Imali. Ngonovemba 5, 2013, Eminem bakhululwe wakhe wesibhozo Studio album, i-Marshall Mathers LP 2, awathi kanjalo uphumelele a Grammy kweelwimi, kuba kuqhutywe 15 career mbasa. Ngonovemba 24, 2014, ShadyXV, yesibini okuqhelekileyo nge-i-american ilebhile Shady Iimbali, waba bakhululwe kwi Shady kwaye Interscope. Ngomhla we-15 disemba, ngowama-2017, Eminem bakhululwe i-album Revival, yalandela ezintandathu kamva ngo Kamikaze.
Eminem ngu owenza ezahlukeneyo imisebenzi: unabo eyiyeyakhe imbali ilebhile, athe lilawula iilwandle kunye wakhe Umphathi Upawulos Rosenberg, kwaye sele eyiyeyakhe radio station, Umthunzi 45 kwi Sirius XM Kanomathotholo. Kwi-2002, Eminem starred kwi-semi-autobiographical hip-ngcileza-imeyl i-Wesibhozo mile. Yena uphumelele Academy kweelwimi kuba eyona ngoma kuba wefilim, ngokuba kuqala i-rap imvumi ukuphumelela le mbasa. Kanjalo wabonakala cameo kwi-imiboniso "Moika "(2001)," Pranksters "(2009)," enze udliwano-ndlebe "(2014) kwaye lwethelevijini uphawu "Beauties".
Abantu baseYunayithedi Steyitsi
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-3 Eyo Mnga 2020, kwi-04:25